ကလေးများနှင့်အတူလန်ဒန် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | လန်ဒန်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြတိုက်များ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ လွယ်ကူစွာသွားလာရလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းများကြောင့်ကလေးများနှင့်အတူအလည်အပတ်သွားရန်အလွန်ရင်းနှီးသောမြို့ကြီးများရှိသည်။ လန်ဒန် ဒါကြောင့်တူရဲ့ ကလေးများနှင့်အတူသွားရောက်ရန်မြို့ကြီး။ ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားရခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကလေးများကြီးပြင်းလာပြီးနှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အနည်းဆုံးအခါအားလျော်စွာသင်သည်ကလေးများနှင့်အတူခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ သံသယတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဘယ်လိုလုပ်တတ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပါ။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများနှင့်အတူအားလပ်ရက်များကိုစီစဉ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဒီနေ့ကြည့်ရအောင် ကလေးများနှင့်အတူလန်ဒန်မှာဘာလုပ်ရမှန်း.
အမှန်မှာယနေ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုများစွာသည်ပိတ်ထားသော်လည်းဒီကပ်ရောဂါဖြတ်သန်းမည့်အချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်သည်။ အမှန်တရားကတော့ လန်ဒန်ရှိကလေးများနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အများအပြားဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ် အများအပြားအခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးပေါဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စျေးလည်းကြီးတယ်။ လန်ဒန်ဟာဥရောပမှာစျေးအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
လန်ဒန်ရှိကလေးများအတွက်အခမဲ့ဆွဲဆောင်မှုများကဘာတွေလဲ။ ပြတိုက် လန်ဒန်ရှိပြတိုက်အတော်များများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်အလှူငွေများလက်ခံရရှိသည်၊ သို့သော်သူတို့မလိုအပ်ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ယခုအချိန်တွင်အစိုးရက၎င်းတို့သည်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်အခိုင်အမာဆိုထားသဖြင့်ကြိုတင်စစ်ဆေးရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးပြတိုက်များတွင်စောင့်ဆိုင်းနေသူများရှိသော်လည်း၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်။ ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးလန်ဒန်ပြတိုက်များထဲမှတစ်ခုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သဘာဝသမိုင်းပြတိုက် ဗစ်တိုးရီးယားစတိုင်နှင့်အတူတူပင်အဆောက်အ ဦး မှ စတင်၍ ကြီးမားသောအံ့သြဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒိုင်နိုဆောပြပွဲတစ်ခု၊ animatronic T-Rex၊ ကြီးမားသောအရိုးစုများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပြပွဲများရှိသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်များနှင့်စနေ၊ ခရစ်စမတ်မှာရေခဲတုံးလေးကို carousel ထဲကနေတပ်ထားတယ်။
ဗြိတိသျှပြတိုက်: ရှေးအီဂျစ်သည် Rosetta Stone ဖြင့်ကျော်ကြားသောအကောင်းဆုံးဘဏ္treာရေးဖြစ်သည်။ သို့သော်ရှေးဟောင်းဂရိ၊ ရောမနှင့်အာရှယဉ်ကျေးမှုများလည်းတည်ရှိသည်။ ကောင်းတာကပြတိုက်မှာကလေးတွေအတွက်အသံလမ်းညွှန်တွေရှိတယ်။ သင်အတွင်း၌စားနိုင်သော်လည်းစျေးပေါသည်မဟုတ်။
သိပ္ပံပြတိုက်- ၎င်းသည်သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အခမဲ့ ၀ င်ခွင့်ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အသက်အရွယ်အလိုက်ကလေးများအတွက်နေရာနှစ်နေရာရှိသည်။ ကလေးငယ်များအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်သဘာဝသမိုင်းကဲ့သို့ပရိသတ်သိပ်မများသောကြောင့်လူအုပ်ကိုမကြိုက်လျှင်သင်ရပ်နိုင်သည်။
V&A ပြတိုက်: ၎င်းသည်ကလေးများအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အပေါ်ထပ်မှာနာမည်ကြီးဂီတပညာရှင်တွေရဲ့အ ၀ တ်အစားတွေရှိတယ်။ မင်းကအဝတ်အစားကိုစမ်းကြည့်နိုင်တယ်။ ၎င်းတွင်အသံလမ်းညွှန်များရှိပြီးအလွန်တိတ်ဆိတ်သောပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ကော်ဖီဆိုင်များသည်လှပသည်။
Tate Modern: တကယ်လား ဟုတ်ပါတယ်၊ Wall Wall Art ကွန်ပျူတာပြပွဲကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်Dalíကိုကြိုက်လျှင်စုဆောင်းမှုသည်အလွန်လှပသည်။
ဒီစာရင်းထဲမှာငါတို့ထည့်နိုင်သည် အနုပညာအမျိုးသားပြခန်းသင်၏ကလေးများသည်အနုပညာကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤကျော်ကြားသောပြတိုက်များအပြင်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည် အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောပြတိုက် ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ: ကလေးပြတိုက်နှင့်ကစားရန်ကစားစရာအများကြီးနှင့်တကွ, သတ္တဗေဒပြတိုက်အရိုးနှင့်အရိုးစုရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ Clin အကျဉ်းထောင်ပြတိုက်အဟောင်းနှင့်အစစ်အမှန်ထောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ် k ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သေချာaရာဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်တွင်ကိုယ်ရံတော်ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် Whitehall အတွက်မြင်းစီးသူရဲချီတက်ပွဲ။ Wellington Barracks အစောင့်များသည်စိန့်ဂျိမ်းပန်းခြံရှေ့တွင်၊ ထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားပြီး ၁၁ နှစ်တွင်ကွန်ကရစ်အပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်သောကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးသည်မနက် ၁၁း၀၀ နာရီတွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များသည်ရာသီအလိုက်လည်းကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ဇယားကိုစစ်ဆေးရန်မိဘ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။
ကလေးများနှင့်လည်းသင်သွားနိုင်သည် Trafalgar ရင်ပြင်ကိုသိလာပါ နပိုလီယံစစ်ပွဲများအတွင်းဤတိုက်ပွဲကိုအမှတ်ရခြင်း။ ၎င်းသည်လန်ဒန်အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိပြီးပtheိပက္ခအတွင်းသေဆုံးသွားသောရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနယ်လ်ဆင်၏ရုပ်ထုရှိသည်။ အနားယူရန်နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကလေးများနှင့်အတူကောင်းသောကောင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် Hop On Hop Off ခရီးစဉ်။ ကားအများစုသည်အမိုးမရှိသောကြောင့်နေ့သည်သာယာလှပသည်ဆိုပါစို့။ လက်မှတ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးဘတ်စ်ကားကသင့်ကိုတစ်မြို့လုံးအနှံ့အပြားဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပေးပါတယ်။
ငါတို့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြောင်းပြောနေတာလေ ... လန်ဒန်ရှိကလေးများနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ရန်အဆင်ပြေသလား။ မေးခွန်းကောင်း။ သငျသညျသိရန်ရှိသည် မြေအောက်ရထားဟာအလုအယက်နာရီမှာပြည့်နေတယ် (မနက် ၇း၃၀ မှ ၉း၃၀ နာရီနှင့်ညနေ ၄း၃၀ နာရီ ၆း၃၀) ။ သင်၌အိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လှည်းတစ်စီးရှိပါကလမ်းပေါ်တက်။ ဆင်းသွားသောဓာတ်လှေကားအနည်းငယ်သာရှိသည်။ နှစ်ကုန်းပတ်ဘတ်စ်ကားများသည်ကလေးများအတွက်ရေပမ်းစားပေမည်၊ သို့သော်ပိုက်ဆံရှိလျှင်တက္ကစီသည်အမြဲအဆင်ပြေသည်။ ဒါမှမဟုတ် Uber ။
၁၁ နှစ်အောက်ကလေးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူဘတ်စ်ကားများ၊ မက်ထရိုနှင့် DLR များအခမဲ့သွားလာနိုင်သော်လည်းသင် ၅ နှစ်အောက်အရွယ်ရှိရထားများပေါ်တွင် မူတည်၍ သိရသည်မှာမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာ၊ ကမာကဒ် သို့မဟုတ်အချို့သောအခြားခရီးသွားကဒ် ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးဇုန် 1 နှင့်2အတွင်းဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဆိုင်ကယ်ငှားပါ အားလုံးမြို့ကျော် Boris စက်ဘီး၏။ လမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုတာငါမသိပေမယ့်ပန်းခြံတွေကိုကြည့်ရတာကောင်းတယ်။
အဲဒီလိုပြောရရင်လန်ဒန်ကကလေးငယ်တွေအတွက်ခင်မင်စရာကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုသွားကြည့်ကြစို့။ The London Eye နှင့် Sea Life Aquarium သူတို့အလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။ ကူးတို့ဘီးပေါ်စီးနင်းလိုက်ပါခြင်းသည်နာရီဝက်ခန့်ကြာပြီးမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းများသာယာသည်။ နေ့စဉ်နံနက် ၁၀ နာရီမှ စ၍ ဖွင့်သည် အွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေဝယ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ တကယ်တော့အကြံပြုလိုသော combo တစ်ခုဖြစ်သည်။ London Eye, cruise and Madame Tussaud ပြတိုက်။
နောက်ထပ်အကြံပြုဆွဲဆောင်မှုသည် လန်ဒန်မျှော်စင် သူတို့ရဲ့ macabre ပုံပြင်များ, ဒါမှမဟုတ် လန်ဒန်ထောင်s ။ က မြစ်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှခုန်ဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှဤနည်းစနစ်နှင့်အတူအပျော်စီးသင်္ဘောများလည်းပါ ၀ င်သည်။ လန်ဒန်တစ်လျှောက်တွင်ဆိပ်ကမ်း ၁၀ ခုကျော်ရှိသည်။
သင်၏ကလေးတွေသည်ကစားစရာကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးအမ်လီရဲ့အရုပ်ဆိုင်ကြမ်းပြင် ၇ ခုနှင့်ကစားစရာအရုပ်အမျိုးမျိုးပါရှိသည်။ သင်လည်း Lego ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဆယ်စုနှစ်ခြောက်ခုပြည့်တဲ့ပဉ္စမထပ်ကိုရောက်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်ထပ်အထင်ကရလန်ဒန် site ကိုဖြစ်ပါတယ် Londes တိရစ္ဆာန်ရုံတစ်နှစ်လျှင်aည့်သည်သန်းတစ်ရာကျော်ရှိသောကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ တွားသွားသတ္တဝါအိမ်၊ ငါးမွေးကန်၊ ခြင်္သေ့၊ lemurs၊ ပင်ဂွင်း၊ မျောက်နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။
တိရစ္ဆာန်ရုံအတွင်း၌တည်ရှိသည် Regent ပန်းခြံအင်္ဂလိပ်မြို့တော်ကိုလှပသောရှုခင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်သော Primrose Hill ရှိသာယာလှပသည့်ရှုခင်းနှင့်လှပပြီးလှပသောရှုခင်းသာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အငယ်ဆုံးကလေးများအတွက်ကစားရန်နေရာကောင်းတစ်ခုသည်ကစားကွင်းဖြစ်သည် မင်းသမီး Diana သတိရအောက်မေ့ဖွယ်ဥယျာဉ်များ, 12 နှစ်အောက်ကလေးများအဘို့, ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောနှင့်အတူ။
တကယ်တော့, လန်ဒန်တွင်ပန်းခြံများနှင့်ပန်းခြံများစွာရှိသည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းလန်ဒန်မြို့သည်အသက်အရွယ်မရွေးကလေးသူငယ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းထဲတွင်လန်ဒန်ဂန္ထဝင်မြောက်မြားစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည် လန်ဒန်ရှိကလေးများနှင့်အတူဘာလုပ်ရမလဲ.
ဥပမာ? Westminster Abbey သည်စိန့်ပေါလ်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးဖြစ်သည်။ သင်္ချိုင်းများရှိသည့်ရှေးဟောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံများမှတပါး။ တခါတရံတွင် ၄ င်းတို့တွင်မည်သည့်မိဘများရှိသည်။ ငါ့အဘ, ဥပမာ, သမိုင်းကိုချစ်, ဒါကြောင့်ငါ့ခရီးစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့ပုံပြင်များနှင့်ဆက်စပ်သောနေရာများပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးလန်ဒန်မှာအများကြီးရှိတယ် ရုပ်ရှင်ရုံ ထို့အပြင်နှင့်ကူးစက်ရောဂါလွန်သောအခါသင်သည်အချို့သောကလေးများယူသွားနိုင်ပါတယ် ကလေးဂီတ ဟယ်ရီပေါ်တာလိုပဲ
ဒီစီးရီးအကြောင်းပြောရရင်မင်းမြို့ကနေအမြဲတမ်းနည်းနည်းထွက်ပြီးစတူဒီယိုတွေနဲ့နီးကပ်လာနိုင်တယ်။ Warner Bros စတူဒီယိုတွင်ဟယ်ရီပေါ်တာ။ သူတို့ကိုသင်လည်းသိနိုင်သည် Stonehenge, ကီလိုမီတာ ၁၄၀ အကွာမှာ အောက်စဖို့ဒ၈၃ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရထား၊ မင်္ဂလာပါ နှင့်၎င်း၏သာယာလှပသောကျေးရွာများ ... ပြီးတော့စာရင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်, သင်ရွေးချယ်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » လန်ဒန် » ကလေးတွေနှင့်အတူလန်ဒန်
Santa Claus ကျေးရွာ